Nezvedu - Mestech Industrial Limited
Mould mugadziri uye mhinduro mupiki, China
Mestech yakavambwa muna2009, iri muSenzhen, iyo indasitiri yekugadzira indasitiri kumaodzanyemba kweChina. Mestech yakazvipira kuumba kugadzira uye zvikamu zvepurasitiki kuumba. Iye zvino isu tinowedzera basa redu kune chigadzirwa dhizaini, simbi kufa kukanda, kutsika uye machining. Isu tinopawo vatengi neese-yekumira sevhisi kubva kune zvikamu kusvika kumagumo echigadzirwa chechigadzirwa.
Izvo zvikamu zvepurasitiki uye simbi zvikamu uye zvigadzirwa zvatinogadzira zvinofukidza minda yakawanda.Ivo vanosanganisira Maindasitiri, Kurapa, Zvemagetsi, Magetsi, Magetsi, Zvikamu zveMotokari, Zvishandiso zveKumba uye zvigadzirwa zveVatengi. Isu tinogara tichipfuura zvinotarisirwa nevatengi vedu nekupa simba vese vanobatana uye nekugadzira tsika inogamuchira kuvandudzwa, kusimba kwekugadzira uye kudyidzana-kwekudyidzana kushandira kuona kukosha kwakanyanya kune vatengi vedu.
Kubva pakagadzwa, Mestech yakazvipira kupa vatengi zvigadzirwa zvinoshanda uye zvemhando yepamusoro uye masevhisi. Isu tine timu yehunyanzvi yeinjiniya, michina yakashongedzerwa uye inoshanda manejimendi sisitimu. Isu tinogara tichishandisa tekinoroji nyowani uye manejimendi nzira kuunganidza ruzivo mupurasitiki muforoma kugadzira, kugadzirwa kwejekiseni, simbi kufa-kukanda, chigadzirwa dhizaini uye chigadzirwa chechigadzirwa kusangana nezvinodiwa zvevatengi. Nesimba rinotungamira, rinonyanya kuratidzwa mune zvinotevera zvinhu.
Injiniya timu yedu
Mainjiniya edu vane hupfumi ruzivo mukugadzira uye kugadzira maitiro epurasitiki mativi, simbi zvikamu uye kuumbwa. Ivo vanoshandisa software kugadzira mafuruu uye zvigadzirwa. Ivo vanokwanisa kupa vatengi zvigadzirwa, dhizaini ongororo, kuongororwa kwenjodzi uye mhinduro.
Mestech mainjiniya anogona kushandisa zvinehunyanzvi UG, PROE, Moldflow uye mamwe ma software ekugadzira dhizaini uye kuongorora. Iwo maumbirwo atinoita ekuvhara auto zvikamu, zvekurapa zvikamu, zvigadzirwa zvemagetsi zvigadzirwa, midziyo yemumba, emagetsi maindasitiri, kuchengetedza kwezvakatipoteredza uye zvinodikanwa zvezuva nezuva. Isu tinokwanisa kugadzira uye kugadzira HASCO uye DEM zvimiro zvakaumbwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, uye kuzvitumira kune dzimwe nyika nematunhu.
Mestech mainjiniya anogona kushanda nevatengi kupa epurasitiki chikamu dhizaini uye simbi chikamu dhizaini yezvigadzirwa zvemagetsi uye zvigadzirwa zvemagetsi, uye voita kugona kuongorora, kurukura nekuwana matambudziko uye nekupa mazano ekuvandudza, pamwe neyakaumbwa dhizaini uye kugadzira mumatanho anotevera.
Tine timu yeinjiniya, vanoita chigadzirwa dhizaini uye dhizaini dhizaini uye chirongwa chinotevera. Kana iwe uine chirongwa chitsva mumaoko ako chinoda kugadzira mapurasitiki uye jekiseni zvakaumbwa zvikamu, ndapota nyorera timu yedu yehunyanzvi, isu tichaongorora yako data uye titumire iwe imwe pfungwa yekukwirisa yako chikamu dhizaini, izvi zvichave nechokwadi chekuti chirongwa chako chichava kubudirira panguva yekugadzira chakuvhuvhu uye chengetedza yakawanda yenguva yekugadzira chakuvhuvhu.
Fekitori yedu uye zvigadzirwa
Mould uye jekiseni kuumbwa pamwe nesimbi kufa kukanda zvinotsamira zvakanyanya padanho remidziyo.
Mumusangano weforoma, kuwedzera kune mainjiniya ekugadzira mainjiniya, mainjiniya ekugadzira uye masters eforoma, kambani yedu inoshingairira kuteedzera yazvino michina yekugadzira michina, yakashongedzerwa nemhando yepamusoro yeCCC maturusi emuchina, EDM yemoto inoumba michina. Iyo yekumhanyisa kumhanya yedu yepamusoro-inomhanya CNC muchina chishandiso inogona kusvika 24000rpm.
Pamusoro pemhando dzese dzeforoma, isu tinoitawo maviri-mavara jekiseni muforoma, seti doro chakuvhuvhu uye isa muforoma, simbisa muforoma, uye gadzira yakakura-mikuru muforoma mukati memamita matatu.
Panyaya yejekiseni kuumbwa, isu tine jekiseni kuumbwa michina kubva pamatani zana kusvika kumatani mazana maviri, maviri-mavara jekiseni kuumbwa michina uye yemagetsi-inomhanya jekiseni jekiseni kuumbwa michina. Kuwedzera kune jekiseni kuumbwa kweakawanda saizi epurasitiki zvikamu, tinogona kuburitsa maviri-mavara mativi, matete-akavakirwa mativi uye makuru-saizi zvikamu. Zvikamu zvakaumbwa zvinogona kusvika 1.5 mita kureba uye iyo thinnest chikamu ukobvu inogona kunge iri 0.50 mm
Tine makumi matatu nemaviri majekiseni michina ayo iwo ekumanikidza mauto masosi anovhara 90T ~ 2000T, kaviri-jekiseni muchina, ine 50 ~ 60 vashandi. Simba rekugadzira 1.5 mamirioni zvikamu pamwedzi.
Die vakakanda workshop
Mundima yesimbi inoumba, isu tinogona kupa iyo yekufa ichikanda kugadzirwa kwe zinc alloy uye aluminium alloy, pamwe neyakajeka machining ezvimwe zvikamu zvesimbi. (ndapota tarisa kune peji "simbi kufa kukanda" uye "CNC machine" kuti uwane mamwe mashoko.)
Isu tinosuma manejimendi manejimendi uye ERP system mune yekugadzira uye yekugadzira maitiro. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, isu tinogadzira nguva kuronga uye kukwidziridza maitiro kubva dhizaini, kutenga zvinhu kusvika mukugadzirisa, kugadzira, kuongorora uye kutumira, kuitira kupfupisa nguva yekuvaka uye kudzikisa mutengo weforoma yako uye kugadzirwa.
Hunhu hunhu hwakakosha kuti uve nechokwadi chekushanda kwezvigadzirwa. Isu tasimbisa yakakwana mhando sisitimu uye takagadzira mhando maitiro uye zviyero kuona kuti izvo zvigadzirwa zvakagadzirwa zvinosangana nezvinodiwa zvevatengi, uye kuona kuti kuburitswa kweanokwanisa zvigadzirwa kune vatengi. Sanganisira
Muchikamu chekugadzira chiganda, tanga tichiongorora hunhu kubva pakuumbwa kwekuumbwa
1. Ruzivo kuongororwa kwevatengi zvinodiwa
2.Mold dhizaini yekugona kuongorora
3. Mould kutongwa dhizaini
4. Mould yekupedzisira dhizaini yekusimbisa
5.Kuuya kuongorora kweforoma simbi
6. Die machining divi kuyerwa
7. Kuyerwa kwekuregedza saizi yemagetsi
8. Mould bvunzo uye kuongorora
9. Kuedzwa kwekugadzirwa kwekuyedza
1. Kusimbiswa kwezvikamu zvinokwanisa uye sampuli dzekugadzira
2. Mass kugadzirwa chinyorwa chekutanga kuongorora
3. Kuongorora kwekugadzira
4. Kuongorora kwakazara uye cheki yekutarisa
5. Kutsvaga kwemhando yepamusoro
Isu tine QC timu, uye kuyedza & kuyera michina: 3D Coordinate Kuyera Mashini uye muvara tester.
Yedu nyanzvi yekutengesa kunze timu
Mestech inoshanda pamwe nevadyidzani vanobva kune dzakawanda nyika kwemakore mazhinji, isu tinoita akasiyana mwero mafomu uye zvigadzirwa kwavari, pamwe ne-yekumira sevhisi. Isu takamboona vekunze kutengeserana nyanzvi timu. Ivo vanoziva chigadzirwa tekinoroji uye vanogona kukurukura dhizaini, maitiro, bhizinesi uye zvinhu zvekutakura newe muChirungu. Ivo vanogona kunyatsonzwisisa zvaunoda uye nekukupa iwe panguva yakakodzera uye chaiyo zvigadzirwa uye masevhisi.